Tababaraha Man City Pep Guardiola Oo Diiday Saxiixyada Bisha Janaayo
HomeWararka Ciyaaraha MaantaTababaraha Man City Pep Guardiola oo diiday saxiixyada bisha Janaayo
Pep Guardiola ayaa sheegay in Manchester City aysan sameyn doonin saxiixyo cusub suuqa janaayo.
City ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigtay todobaadyadii ugu dambeeyay waxana ay u kacday kaalinta 2-aad ee kala saraynta premier League kadib markii ay shan guul oo xiriir ah gaadhay.
Xowligooda sii kordhaya ayaa sidoo kale u arkay iyaga inay gaaraan finalka Carabao Cup, wareega afaraad ee FA Cup iyo wareega 16ka Champions League.
Aagga kaliya ee Daciifka ka Ah Kooxda wuxuu ahaa weerarka dhexe, iyadoo labada Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus ay seegeen tiro badan oo ciyaaro ah dhaawacyo iyo is-karantiil la xiriira coronavirus.
Guardiola ayaa u dirtay garabka Ferran Torres weeraryahan ku meel gaar ah, Kevin De Bruyne ama Raheem Sterling oo ah ‘sagaal aan Sax aheyn ama waxay fursad siinayaan 17-jirka Liam Delap .
Laakiin Guardiola ayaa u sheegay beIN Sports: “Ma saxiixi doonno wax heshiis ah inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xilliga qaboobaha. Kama aanan hadlin tan, laakiin waxaan ku dhameysan doonnaa xilli ciyaareedka ciyaartoyda aan haatan heysano.”
Guardiola wuxuu ku qanacsan yahay inay jirto tayo ku filan kooxda.